Inhloko ZeNdaba Mabasa 15, 2022
*** Uzulu weZimbabwe wamukela ngemizwa ehlukeneyo umkhosi wokuthakazalela usuku olunanzwa khona uzibuse welizwe, olweIndependence Day, lonyaka owenzelwa ko Bulawayo okwakuqala embalini yelizwe lokhe latholayo inkululeko embusweni wabamhlophe ngomnyaka ka1980.
*** Inengi lamakholwa esiKristu e Zimbabwe bananza ikhefu lephasika eliqale lamhlanje kuhlangene lamalungiselelo ekhefu likazibuse, eleIndependence Day, NgoMvulo mhlaka 18 Mabasa, enkundleni eyeBourbarfields koBulawayo, asefike esibangeni esiphezulu lobanje uzulu ethi lelilanga seliphele amandla ngoba izithelo zakhona lokhe engaziboni.
*** Kulezinye izizalwane zakwele South Africa ezithi abantu bokuza benza okungalunganga elizweni okunjengokutshontsha, ukuthengisa izidakamizwa lokunye okwenza bezondwe nguzulu kulelolizwe.
*** Zithobelene inkunzi zomdlalo wenguqu iqembu le Highlanders kanye lele Dynamos phambilini komdlalo wenkezo ye Independence wona ozaqhutshwa ngoMvulo enkundleni ye Barbourfields ko Bulawayo.
*** Kuliviki kuhlelo Woza Friday njengoba umhlaba unanza ikhefu elephasika sicabange ukulilethela umculi wengoma zokholo uFainos Bhebhe, ocula ekoBulawayo, njalo engumfundisi welinye ibandla kulelidolobho.
***KuLivetalk sikhangela udlakela olwenzakala kwele South Africa lokuhlaselwa kwabokuza yizizalwane zalelo lizwe kanye lokunanzwa kwekhefu lephasika elimanyene lelikazibuse eleIndependence Day ngalimpelasonto.